ምሳሌ 9 NASV – Mmebusɛm 9 AKCB | Biblica
ምሳሌ 9 NASV – Mmebusɛm 9 AKCB
Nyansa Ne Nkwaseasɛm Frɛ
1Nyansa asi ne fi;
wasisi nʼafadum ason.
2Wasiesie ne nam de afra ne nsa,
wato ne pon.
3Wasoma ne mmaawa, na ɔfrɛ
fi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea hɔ se,
4“Momma ntetekwaafo nyinaa mmra ha!”
Ɔka kyerɛ wɔn a wonni atemmu se,
5“Mommra mmedi mʼaduan
na monnom nsa a mafra no.
6Munnyaw mo ntetekwaasɛm no na mubenya nkwa;
monnantew ntease akwan so.”
7Nea ɔteɛteɛ ɔfɛwdifo no frɛ ahohorabɔ;
na nea ɔka amumɔyɛfo anim no nya ɔyaw.
8Ɛno nti, nka ɔfɛwdifo anim na ɔmmɛtan wo;
ka onyansafo anim na ɔbɛdɔ wo.
9Ma onyansafo akwankyerɛ na ɔbɛkɔ so ahu nyansa;
kyerɛkyerɛ ɔtreneeni na ɔde bɛka nʼadesua ho.
10Awurade suro yɛ nyansa mfiase
Ɔkronkronni no ho nimdeɛ yɛ ntease.
11Me mu na wo nna bɛdɔɔso,
na wɔde mfe bɛka wo nkwa ho.
12Sɛ woyɛ onyansafo a, wubenya wo nyansa so mfaso;
sɛ woyɛ ɔfɛwdifo a, wo nko ara na wubehu amane.
13Ɔbea ɔkwasea yɛ ɔkasafo;
onni ahohyɛso na onni nimdeɛ.
14Ɔte ne fi pon ano,
na ɔte akongua a esi kuropɔn no sorɔnsorɔmmea,
15na ɔfrɛfrɛ wɔn a wotwa mu wɔ hɔ,
wɔn a wɔnam wɔn kwan so tee se,
16“Momma ntetekwaafo nyinaa mmra ha”
17“Nsu a wowia no yɛ fremfrem
na aduan a wodi no ahintawee no yɛ dɛ!”
18Nanso wonnim koraa sɛ awufo wɔ hɔ
sɛ nʼahɔho wɔ ɔda no ase tɔnn.
AKCB : Mmebusɛm 9